Ahoana ny fanaovana sary vongana sary ao amin'ny Adobe Illustrator, mora sy haingana | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Fitaovana famolavolana, sary
Rehefa manao vector isika, ny ataontsika dia mamadika sary izay misy bitmap, ohatra amin'ny endrika jpg na png, ho sary vector (SVG). Izany hoe, manova ny pixel ho vector izahay.
Ny fiasana sary sary dia manana tombony sasany azo esorina tsy misy fanodikodinana ary vonona ny ahitsy izy ireo. Amin'ity fampianarana ity dia lazainay aminao ny fomba ahafahanao manaingo sary amin'ny alàlan'ny Adobe Illustrator. Voalohany, hanaovanay sary an-tsary ny sary iray, ary avy eo averinay amin'ny sary ny fizotrany.
1 Vectorize sary
1.1 Mamorona artboard vaovao ary sokafy ny sary
1.2 Ampandehano ny tontonana «manadihady sary» ary apetaho amin'ilay sary
1.3 Ataovy azo ovaina ny vector anao ary esory ny lamosina
2 Inona no mitranga rehefa manamboatra sary isika?
Mamorona artboard vaovao ary sokafy ny sary
Andao hanomboka amin'ny famoronana artboard vaovao amin'ny Illustrator, fa mila tsindrio fotsiny izany «File», eo an-tampon'ny efijery, ary safidio ny "vaovao". Hataoko habe A4 io ary hapetrako marindrano.
dia hanokatra ny fanoharana izahay. Afaka manao izany amin'ny fomba telo ianao:
Misintona mivantana ny sary avy amin'ny fampirimana
Fanindriana> fisie> toerana
Mampiasa ny baiko fanovana hitsin-dàlana
Notsongaiko ny sary tao amin'ny Internet ary io no hampiasako. Raha mijery sy manalalaka ampy ianao dia ho hitanao fa misy piksel ny sary, rehefa manaingo azy isika dia hanjavona ireo pixel. Handahatra ny sary aho mba hahitanao ny fiovana sy ny tsy fitovizany, fa raha tianao dia azonao atao ny miala amin'io dingana io.
Ampandehano ny tontonana «manadihady sary» ary apetaho amin'ilay sary
ankehitriny ndao hosokafantsika ny tontonana "sary manadihady", izay mety nafeninao. Mba hahitana ireo takelaka sy fitaovana hita ao amin'ny Illustrator dia tokony hampavitrihanao azy ireo ao amin'ny kiheba "varavarankely" (eo amin'ny menio ambony). Noho izany handeha ho any amin'ny "varavarankely" isika ary eo amin'ireo safidy rehetra hofidintsika ny "sary manadihady".
Tsindrio ny Illustration, ary ao amin'ny tontonana fanarahana sary, dia hofidintsika ny Mode "color". En "mijery", tsy maintsy nisafidy ianao "Voka-pikarohana". Etsy ambony, manana safidy ianao milaza izany "Preset" Ary ao anatin'io menio kely io dia manana safidy maro hisafidianana ianao. Ny fisafidianana ny iray na ny iray hafa dia miankina amin'ny haavon'ny mari-pahaizana izay tadiavintsika amin'ny fanovana ny sary bitmap ho sary vector. Andao hojerentsika ny sasany amin'izy ireo:
Ho an'ny safidy 3, 6 ary 16 loko Izy io dia manondro fetra farany ambony loko hampiasaina amin'ny valin'ny fikarohana. Raha mametraka loko 16 ianao dia ho hitanao fa amin'ity sary ity dia mahazo vokatra tsara isika. Raha efa midina amin'ny loko 6 isika dia very antsipiriany vitsivitsy ary raha midina amin'ny 3 isika vao mainka. Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny masonao, izay eo ankavanan'ny pikantsary manadihady sary eo akaikin'ny safidy "view", dia ho hitanao ny mahasamihafa ny sary tany am-boalohany sy ny fitadiavana izay ananantsika izao. Zahao ao ary ho hitanao fa efa nanjavona ireo piksel.
Ny sary Hi-Fi sy ny toerana misy ny tsy fivadihana ambany dia mazàna ampiharina rehefa manana sary isika na sary misy tsipiriany maro, ho an'ny sary tsotsotra toa an'io dia tsy nilaina izany. Azonao ampiharina izy io, raha mampihatra, ohatra, "sary tsy fivadihana ambany" dia ho tsara ihany koa.
Misy toerana sy fomba maro hafa. Raha misafidy ny maody "grayscale" ianao na raha "presets" dia asio "shade of grey" dia hahazo vector amin'ny loko volondavenona ianao. Ny fisafidianana ny maody "mainty sy fotsy" na ny preset "sketch graphic" dia hamorona karazana kisarisary.
Amin'izao fotoana izao handeha hisafidy ny fametrahana "loko 16" isika.
Ataovy azo ovaina ny vector anao ary esory ny lamosina
Efa nanana ny sary vector izahay, fa izao kosa hasehoko anao a fika mba hahafahanao manova sy manova azy haingana. Rehefa manana sary vektor namboarina niaraka tamin'ny Illustrator, toa an'ity kintana ity isika, amin'ny fampiasana ny fitaovana "fifantenana mivantana" dia afaka mifidy ireo teboka vatofantsika isika ary afaka manova azy araka izay itiavantsika azy. Etsy ankilany, raha manome ny sary noforonintsika isika, dia tsy afaka manao na inona na inona.
Mba hamahana izany dia safidio ny sary ary eo amin'ny menio ambony dia mandehana mankany zavatra> manitatra. Ao amin'ny menio hisokatra, homarihinay "object" sy "fenoy". Miaraka amin'ity fitaovana ity, ny zava-bitantsika dia ny mizara zavatra amin'ny singa rehetra mandrafitra azy, mba hahafahana manova ny tsirairay amin'izy ireo. Azontsika atao ny mamafa ireo singa, manova loko, mamindra azy ireo, mandrefy azy ireo ...
Io dia hahafahanao mamafa ny ambadiky ny sary. Raha esorinao hiala amin'ny solaitrabe ity sary ity dia ho hitanao fa misy fotony fotsy izy io, satria nametraka "fanitarana" tamin'ny fitaovana fifantenana mivantana ianao, azonao atao ny misafidy ny aoriana ary manala azy fotsiny amin'ny fipihana ny bokotra backspace eo amin'ny fitendry.
Inona no mitranga rehefa manamboatra sary isika?
Amin'ity ampahany amin'ny lesona ity dia nisafidy sary iray misy vahaolana avo be aho, raha ny marina dia mila manandratra be aho vao afaka manavaka ireo piksel. Ho toy izany koa izao ny fomba fiasa. Hampiarahantsika ny "sary manara-penitra", fa amin'ity indray mitoraka ity, fa tsy ny preset 16 loko dia hanome fahatokiana avo ny sary isika.
Raha nifidy sary lehibe toa ahy ianao azo inoana fa hahazo hafatra mangataka anao hanamboatra sary ilay sary ianao afaka mampihatra ny fanarahan-dia. Mba hanarenana sary dia manome izahay «Object» (takelaka ao amin'ny menio ambony)> «rasterize».
Mety, raha vao jerena dia tsy hahita fanovana ianao, fa azontsika ampiharina ankehitriny ny fanitsiana ny sary avo Fidelity. Rehefa mampihatra azy ianao dia zahao mba hahitana tsaratsara kokoa, dia ho hitanao fa namorona karazana izahay sary hoso-doko tena lehibe. Raha toa ny sary fidelity avo lenta dia mangataka ianao Sarina ambany tsy fivadihana, mbola hohamafisina ity vokatra fanaovana sary ity.
Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny "fanitarana", tahaka ny nataontsika tamin'ilay sary teo aloha, dia azontsika atao ny manitsy ny ampahany amin'ilay sary izay tsy maharesy lahatra antsika loatra, eny fa na dia azontsika atao ny mamaky azy io mba hamoronana firaketana misimisy kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » sary » Ahoana ny fomba hanaingoana sary ao amin'ny Adobe Illustrator